Muddee 1 - Giyyaa Eedsii Addunyaa
Muddee 01, 2020
Waggaa 4 dura mootummonni addunyaa weerara dhukkuba Eedisii tti xumuura gochuuf waan sadii karoorfatanii turan.
Kunis,1ffaa kanneen vaayrasii HIV waliin jiraatan baruuf qorannaa 100 keessaa harka 90 gaggeessuu. 2ffaa kanneen vaayrasii HIV waliin jiraatan 100 keessaa harkii 90n dawaa akka argatan gochuu 3ffaan faca'iina vaayrasichaa 100 keessaa harka 90n hanqiisuu kan jedhu ture.
Addunyaan waggoota darban kudhaniif dawaa dhukkuba Eedsii ittisuu argataa jira.Dawaaleen farra Eedsii kun namoonni vaayrasii HIV waliin jiraatan dhukkubicha nama biraatti akka hin dabarsineef sadarkaa ittisuu irra ga'e jira.
Kan waggaa soddomaaf waa'ee HIV/AIDS qorataa turan profeessarri Yunivarsitii Jaan Haapkiins Kris Beeyreer akka jedhanti barrii keessa jirru 2020nii namoota vaayrasii kanaan qabaman harka caalaa kan itti hanqiifnu ture.Addunyaa irratti bara 2019 keessa namoota vaayrasii HIV waliin jiraatan Miliyoona 1.7 qabna turre.Lakkoobsa kana gara walakkaa Miliyoonaa ykn 500.000 gad buusuuf karoora qabannee garu amma iyyu irraa fagoo jirra jedhu.
Gabaasa guutuu caqasaa.
Yunaayitid Isteetis Lollii Naannoo Tigraay Akka Dhaabatu Yaadachiiste
Mannneen Jeneraalotaa fi Qondaalota Waraanaa Dhiheenya Hidhamanii Keessaa Meeshaan Waraanaa Argame, Jedha Poolisiin Federaalaa
Vaayiresiin Koronaa Yunaayitid Isteetis Keessatti Heddummaataa Adeemuun Angawoonni Uggura Sochii Haaraa Akka Labsan Dirqisiise
Muummichi Ministeeraa Itiyoopiyaa Dhimma Tigraay Irratti Wal Ga’ii Paarlaamaa Adaa Waaman
Barattoota Barnoota Sadarkaa Waggaa Xumuraaf Akka Waamichi Taasisamu Beeksifame
HIYUMAAN RAYITS WAACH DHIITTAAN MIRGA NAMOOMAA OROMIYAA KEESSATTI RAAW’ATU XIYYEEFFANNAA ADDUNYAA ARGACHUU QABA, JEHDA
Izeemaan Hogganaa Filatee Jira
Kilabiiwwan Kubbaa Miilaa Oromiyaa Lama Primiiyer Liigii Itiyoophiyaa Keessaa Gad Bu’uun Himame
Ajjeechaa Dhiheenya Toleetti Raaw’atamerraa Kanneen Gargaarsa Namoomaa Gahaa Hin Arganne, Jedhu
XayyaaraanGargaarsa Gara Maqaleetti Geessuu Kan Dhaabatee Ture Jalqabamee Jira